Indlu yeDP - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguDian Pelangi
Ukucwangcisa uhambo oluya ePekalongan kwishishini okanye ukuzonwabisa? Qiniseka ukuba ubhukisha amagumbi akho eDP House kwaye usivumele ukuba sikuvulele ngomtsalane ongapheliyo weJava. Eyona ndawo inencasa emnandi kunye nesulungekileyo ye-sharia yosapho imema ukuba uphumle, uphumle kwaye uzibandakanye kububele obufudumeleyo benkcubeko yasekhaya. I-DP House yeyona mbono yamva nje yendlela yokuphila eyenziwe liphawu lefashoni elithozamileyo elithandwa ngabantu abaninzi... UDian Pelangi. Sijonge ukukwamkela!
IPekalongan, ekwabizwa ngokuba sisiXeko seBatik ekuhlaleni, ikhethwe yiUNESCO njengeSixeko soBugcisa boBugcisa kunye noBugcisa boMntu. Sisixeko esineenkcubeko ngeenkcubeko apho abantu bezizwe ezahlukeneyo bahlala kunye, bahlala besonwabela inkcubeko yomnye komnye kwimiboniso emininzi, imiboniso kunye nemisitho ebanjwa unyaka wonke. I-DP House yenzelwe ukuziva ngathi likhaya elikude nekhaya... ipholile, ishushu kwaye inochuku lomntu ukwenza iindwendwe zizive zamkelekile.
4.20 out of 5 stars from 17 reviews
4.20 · Izimvo eziyi-17
Indlu yeDP ibekwe kwindawo yasePodosugih ethe ngqo entliziyweni yePekalongan. Indlu yeendwendwe ikwisitrato esithe cwaka, kodwa siyimizuzu nje emihlanu ukusuka kwisikhululo sikaloliwe kwaye ukufikelela phantse naphina esixekweni luhambo olufutshane ngenkonzo yemoto ekwi-Intanethi. Ngokubanzi, iPekalongan yindawo yemveli kakhulu enawo wonke umtsalane wedolophu encinci kwaye uninzi lwale nto lubonakaliswa kwindawo yasePodosugih. Rhoqo ngorhatya lwangoLwesibini ukusuka nge-6-9 PM, kukho iMarike yasebusuku yasekhaya ekufuneka ibe namava!
Umbuki zindwendwe ngu- Dian Pelangi
Kuya kuhlala kukho iGosa leNdwendwe elinoBudlelwane elifumanekayo ukuphendula imibuzo okanye uncedo ngayo nayiphi na indlela eyimfuneko.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pekalongan Barat